Soosaarka iyo Warshada Daqiiqda Qamadiga ee Shiinaha is haysta |Chinatown
Qeybta nadiifinta, waxaan ku qaadaneynaa tignoolajiyada nadiifinta nooca qalajinta, sida caadiga ah waxaa ka mid ah 2 jeer shaandheyn, 2 jeer xoqid, 2 jeer dhagxaan dilid, hal mar nadiifinta, 4 jeer hammi, 1 ilaa 2 jeer qoyaan, 3 jeer kala soocida magnetic iyo wixii la mid ah. Qeybta nadiifinta, waxaa jira dhowr habab oo hammi ah kuwaas oo yareyn kara buufinta boodhka ee mashiinka oo ilaalin kara jawi shaqo oo wanaagsan. Tani waa xaashi qulqulaya oo dhib badan oo ka saari karta inta badan qashinka qallafsan, xajmiga dhexe iyo qashinka ganaaxa. Qaybta nadiifinta maaha onley ku habboon sarreenka laga keeno qoyaanka hooseeya iyo sidoo kale sarreen wasakh ah oo ku habboon macaamiisha maxalliga ah.
Qaybta wax-shiidka,waxaa jira afar nooc oo nidaamyo ah oo lagu shiidayo sarreenka ilaa burka.Waxay kala yihiin 4-Break system,7-Reduction system,1-Semolina system and 1-Tail system.Nadiifiyeyaasha waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu helo semolina saafi ah oo loo diro Si loo dhimo taaso wanaajisa tayada daqiiqda xad weyn. Habka qaadista neef-mareenka oo si wanaagsan loo qaabeeyey,dhammaan alaabta wax lagu shubo waxaa lagu wareejiyaa taageere Cadaadiska sareeyo
Qaybtan, waxaan ku siin doonaa golaha kontoroolka koronto, cable signal, saxaarad fiilooyinka iyo jaranjarada cable, iyo qaybaha kale ee rakibaadda korontada. The substation iyo fiilada korontada kuma jiraan macaamiisha si gaar ah loogu baahan yahay. Nidaamka kantaroolka PLC waa ikhtiyaar ikhtiyaari ah macaamiisha. Nidaamka kantaroolka PLC, dhammaan mishiinnada waxaa gacanta ku haya Programmed Logical Controller kaas oo caymin kara mashiinnada si deggan oo faseexa ah u shaqaynaya digniin iyo xasuusi hawlwadeenka si uu u xaliyo khaladaadka.Schneider taxanaha qaybaha korantada waxaa loo isticmaalaa dibadda korontada si habsami leh u socda.
Habayn Awood (t/24h) Roller Mill Moded Qaabka Sifter Meel bannaan LxWxH(m)
CTWM-40 40 Buugga Sifter mataano ah 30X8X11
CTWM-60 60 Buugga Sifter mataano ah 35X8X11
CTWM-80 80 Pneumatic Qorshe Sifter 38X10X11
CTWM-100 100 Pneumatic Qorshe Sifter 42X10X11
CTWM-120 120 Pneumatic Qorshe Sifter 46X10X11
CTWM-150 150 Pneumatic Qorshe Sifter 50X10X11
Mashiinada Wareejinta Daqiiqda Oo Qiimo Leh
Qaadida Screw Tubular
Shaandhaynta Jet-ka Cadaadiska Sare ee la galiyay